Myanmar man held after bomb threat
Tue Oct 28, 2:31 am ET AFP
photo shows Myanmar police officers on patrol in Yangon.
YANGON (AFP) – A man has been arrested in Myanmar after makingaphone call threatening to blow up government offices, state media said Tuesday, as security remained high afterastring of blasts in Yangon.
Tin Myint, 41, was held on Friday, the New Light of Myanmar newspaper reported, three hours after he allegedly threatened to blow up the offices ofapro-junta organisation andalocal police station in downtown Yangon.
The paper did not mention his motive for the threats.
Tin Myint's arrest came afterasuspected bombmaker accidentally blew himself up on October 19 at his home in Yangon in the latest inaspate of blasts in the military-ruled nation.
Myanmar saw four bomb blasts last month, one of which killed two people and wounded 10 atavideo cafe northeast of Yangon. Authorities later arrested an ethnic Karen rebel fighter in connection with the bombing.
The ruling junta has in the past blamed explosions on armed exile groups or ethnic rebels who have been battling the military rulers for decades, but the regime has also started pointing the finger at democracy activists.
State-run media in September accused two members of detained democracy leader Aung San Suu Kyi's National League for Democracy (NLD) of bombing pro-government offices in July.
The NLD wonalandslide victory in 1990 elections, but the junta never allowed it to take office and Aung San Suu Kyi has been under house arrest almost constantly since.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/28/20080အကြံပြုခြင်း
Daniel Cowart,20 (Bells, Tenn. )နှင့် Paul Schlesselman,18 (West Helena, Ark., )တို့
Online မှာတွေ့ခဲ့သည်။...သူတို့ကိုJacksonမြို့အပြင်ဖက်(75 miles east of Memphis, Tennessee)မှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဖက်ဒရယ်ရဲအဖွဲ့ကတနလာင်္နေ့ကထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလိုက်သည်။
စစ်ဆေးချက်များအရ၊စာသင်ကျောင်းမှအမေရိကန်လူမဲ၁၀၀ကျော်ကိုသတ်ရန်ကြံစည်မှု(၈၈ယောက်နှင့်၁၄ယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်လုပ်ကြံရန်စီစဉ်သည်ဟုဆိုသည်)၊အပြင်Sen. Barack Obamaကိုလုပ်ကြံရန်ကြံစည်မှုတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ညစာစားပွဲဝတ်စုံအဖြူရောင် ၀တ်ဆင်၍ဦးထုပ်ဆောင်းထားပြီး၎င်းတို့ကားကိုSen. Barack Obama
၈၈နှင့်၁၄သင်္ကေတသည်(white power movement)အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
(The number 88 is shorthand for “Heil, Hitler” — H is the eighth letter in the alphabet —
and 14 signifiesa14-word mantra among white supremacists:)
Sen. Barack Obama သည် မေ၂၀၀၇ Hillary Clinton နှင့်ယှဉ်၍အရွေးခံရန်ရာထားသည့်အချိန်မှစ
ရသူဖြစ်သည်။Sen. Barack Obama အားလုပ်ကြံရန်ကြံစဉ်မှုမှာဒါပါနှင့်ဆို၃ခုမြောက်အမှုဖြစ်သည်။
John Maccain ကအမေရိကန်တို့၏ကြီးမြတ်မှုကိုတင်စားမဲဆွယ်တတ်ပြီး၊Barack Obama ကစီးပွား
ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြင့်မဲဆွယ်သည်။ဖေါ်မြူလာအရဆိုလျှင် Barack Obama ပဲအနိုင်ရပေလိမ့်မည်။
(အဖြူ)များကကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်း၊အဖြူအမဲကပြားဖြစ်သူ Barack Obama ကိုလူမည်းတယောက်
အဖြစ်လက်မခံသောအဖြူအချို့လည်းရှိသည်။ထို့ကြောင့် Barack Obama သာသမ္မတဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းအား
ကိုသက် အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈
ကိုစိုး အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈
ယင်း ၀န်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့တွင် ကျင်းပသည့် အာရှ-ဥရောပ (အာဆမ်)အစည်း အဝေး တက်ရောက်ပြီးနောက် ပြုံယမ်းသို့ ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတဦးကို ကိုးကား ၍ အေပီသတင်းကလည်း ရေးသားသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း
အေးလဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈
အေးချမ်းမြေ့ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈
အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 28 2008 17:31 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ့ (VBSW) ဟုခေါ်သော လျှို့ဝှက် သိပ်သည်းလှသည့် အဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးဒေသ ရွှေပြည်သာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သူမှာ သူတို့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ ကြေညာလိုက်သည်။
အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 28 2008 10:21 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာအကျိုး ဆောင်ရွက်သည့် ထင်ရှားသော ရှင်သူမြတ်များအား ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့တခုကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ နာလန်ဒါ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်က သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိသရအား ယနေ့ ပေးအပ်ချီးမြှင့်လိုက်သည်။
''သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီးက နိုင်ငံတကာမှာ ဟောတယ်၊ ပြောတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ရောက်နေတဲ့ စာသင်သား ရဟန်းတော်တွေကိုလည်း နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁၀၀ စီ လှူတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း သာသနာပြုပြီး လူတွေအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေတာဆိုတော့ ဆရာတော်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့် ဒီဘွဲ့ကို ပေးတာပါ'' ဟု သူက ထပ်ပြောသည်။
အခမ်းအနားတွင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးက ထေရ၀ါဒနှင့်ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဟောကြားခဲ့သေးသည်။
သီတဂူဆရာတော်ကြီးအား အနီးကပ် ကူညီပေးနေသည့် အရှင် ဦးနန္ဒ၀ံသ ''ဒီဘွဲ့တံဆိပ် ဆပ်ကပ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော်ဘုရားကြီး သဘောထားကတော့ နာလန်ဒါဆိုတာက တချိန်က ပညာအရာမှာ ဧဒင်္ဂ ရခဲ့တဲ့ ရှင်ဿာရိပုတ္တရာ ကိုယ်တော်မြတ် မွေးဖွားရာ နေရာဖြစ်တဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ ဘွဲ့ယူရတဲ့အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောသွားပါတယ်'' ဟု မိန့်ကြားသည်။
ဆရာတော်သည် မြန်မာနိင်ငံက ချီးမြှင့်သည့် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ရရှိပြီးဖြစ်သလို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ Chulalongkorn တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ Ph.D, D.Lit တခုလည်း ရရှိခဲ့သေးသည်။
သီတဂူ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၊ နိုင်ငံတကာ သီတဂူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ရေလှူဒါန်းရေး စီမံကိန်းကို ထူထောင်ခဲ့သူအဖြစ် ဆရာတော်သည် ကျော်ကြားသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်သို့ လှည့်လည်ကာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေး ဟောကြားမှုများလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် မေလဆန်းတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဘေးဒုက္ခကျရောက်ရာ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း လိုက်လံကာ အကူအညီများ ပေးခဲ့သလို စာသင်ကျောင်း ၅၀ ကျော် ပြန်လည်တည်ဆောက်နိင်ရေး အလှူခံ ကြီးကြပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကြီးအား ပဲခူးတိုင်း သဲကုန်းမြို့တွင် ၁၉၃၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ဇာတိကို အစွဲပြုကာ သဲကုန်းဆရာတော်အဖြစ်လည်း လူသိများသည်။
ပီတာအောင်/ ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
‘အာဏာရှင်ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်’ ဟု အမည်ပေးထားသည့် ယင်းအစီရင်ခံစာ၌ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းခလေးငယ်များ လူကုန်ကူးခံနေရမှု၊ ပညာရေးတွင် သမီးမိန်းခလေး၏ ပညာရေးကို သားယောက်ကျားလေး၏ ပညာရေး လောက်ဦးစားပေးမခံရမှု ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုးဝါးသဖြင့် အမျိုးသမီး(၁၂)ဦးတွင် (၁) ဦး ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေစဉ် သေဆုံးနေရမှုနှင့် ကျေးလက်နှင့်တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ နအဖ စစ်တပ်၏ အမျိုးသမီးများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များကို ဒေသခံအမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များနှင့် တကွ တင်ပြ ထားသည်။ ထို့ပြင် အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျင့်သုံးနေမှုကြောင့် မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအ၀န်း၌ အမျိုးသား များလွှမ်းမိုးနေပြီး စစ်တပ်သည် မြို့တိုင်း၊ ရွာတိုင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်တိုင်း၊ အသင်းအဖွဲ့တိုင်းကိုပါ ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း လတ်တလော ရေးဆွဲအတည်ပြုထားသည့် အခြေခံဥပဒေသည်လည်း ကျား၊မတန်း တူရေးကိုအာမခံချက် မပေးရုံသာမက အမျိုးသားများကြီးစိုးသည့် စစ်တပ်ကို လွှတ်တော်အရပ်ရပ်တွင် လေးပုံတပုံချုပ်ကိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်ဟုလည်း ဝေဖန်ထောက်ပြထားသည်။
NEJ/ ၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
အနောက်နိုင်ငံများရှိ မြန်မာစစ်သံမှူးရုံးများကို ပိတ်တော့မည်
NEJ/၂၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရ ကကကြည်း နိုင်ငံခြားငွေ ပြတ်လတ်နေသည့်အတွက် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ စစ်သံမှူးရုံးများကို မကြာခင် ပိတ်တော့မည်ဟု သံတမန်သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
စစ်အစိုးရသည် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ စစ်သံမှူးရုံးများကို ပိတ်ပြီး အာဆီယံနိုင်များဖြစ်သည့် စင်္ကာပူနှင့် ဗီယက်နမ် ၂ နိုင်ငံမှာသာ စစ်သံမှူးရုံး ဖွင့်တော့မည်ဟု ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရာရှိတဦးကလည်း ပြောသည်။ ကကကြည်းအနေနှင့် နိုင်ငံခြားငွေပြတ်နေသည့်ပြင် စစ်သံမှူးများကို စိတ်မချသည့်အချက်သည်လည်း စစ်သံရုံးများ ပိတ်ရသည့်အခြေအနေ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သံတမန်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ယူဆသည်။
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ နိုင်ငံခြားငွေ ပြတ်လတ်နေသည့်အတွက် အိန္ဒိယနှင့် နီပေါနိုင်ငံများရှိ မြန်မာသံရုံးများ ပိတ်ရမည့်ကိန်းဆိုက်နေသည့် သတင်းများထွက်ပြီး မကြာခင် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ စစ်သံမှူးရုံးများကိုပိတ်ဖို့ စစ်အစိုးရမှ စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီးတွင် နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်သူ ဆားဗီယားနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ပြီး ငွေချေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းမှာ စပါးဈေးကျ လယ်သမားများအခက်တွေ့
NEJ/ ၂၈ အောက်တိုဘာ
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မိုးစပါးပေါ်ကာစတွင် စပါးအသစ်ဈေးများ ကျဆင်းနေသောကြောင့် လယ်သမားများ အခက်ကြုံနေကြကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၌ စပါးတင်း (၁၀၀) ပေါက်ဈေး ကျပ် (၃) သိန်းခန့်ရှိရာမှ ယခုနှစ်တွင် ကျပ် (၂) သိန်း (၆) သောင်းခန့်သာရှိကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်း ၀ါးခယ်မမြို့မှ လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော့်လယ် အထွက်စောလို့ နှံကားအမျိုးအစား စပါးကို ကုန်သည်တွေဆီ စပ်ရောင်းတာ၊ ကုန်သည်တွေကရော ဆန်စက်တွေကပါ ဈေးပေးတာ အတော်နိမ့်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ရောင်းလို့မဖြစ်သေးဘူး၊ တခြားလူတွေလည်း ဒီလိုပဲ” ဟု ပြောသည်။
မိုးစပါးအသစ်များ လက်ငင်းတွင် ဈေးနိမ့်နေသော်လည်း ပေါ်ဆန်းမွှေး ဆန်ကောင်းများမှာမူ ဆန်ဈေးရော စပါးဈေးပါ အလွန်မြင့်နေပြီး အိမ်အရောက်ပို့ သန့်စင်ပြီးပေါ်ဆန်းမွှေး တတင်းခွဲတအိတ်လျှင် ကျပ် (၄) သောင်း (၁) ထောင်ထိဈေးပေါက်နေကာ ပေါ်ဆန်းမွှေးစပါးကလည်း ဧရာဝတီတိုင်းမှာတင် ကျပ် (၇) သိန်းကျော် ပေါက်ဈေးရှိကြောင်း ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှ ဆန်ကုန်သည်ကြီးတဦးက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆန်ကြမ်းစပါးဈေး ကျဆင်းရခြင်းသည် မိုးကာလတလျှောက်လုံး ဧရာဝတီတိုင်းမှ ရေစိုဆန်ဝါများ ဈေးကွက်ထဲ အဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်လာခြင်း၊ နာဂစ်လေဘေးကာလအတွင်း အဓိကပျက်စီးသည့်ဆန်များမှာ ပေါ်ဆန်းကဲ့သို့ ဆန်အကောင်းစားများဖြစ်ခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်မှ လေဘေးကူညီမှုအဖြစ် ဆန်များအိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူတင်သွင်းခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆန်ကုန်သည်များက ရှင်းပြသည်။
ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တဦးက “ခုလို ဆန်ကြမ်းစပါးဈေးတွေကျပြီး လယ်သမားတွေ ထိုက်သင့်သလောက်မရရင် အကြွေးပတ်လည် ၀ိုင်းနေမယ်၊ စီးပွားရေးဘ၀ မတိုးတက်ဘူး။ နောက်နှစ်တခြားဟာ ပြောင်းစိုက်မယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာမယ်။ လယ်ယာစီးပွားရေးထိခိုက်မှာ ဖြစ်သလို နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုလည်း ထိခိုက်တာဖြစ်တယ်ဟု” ပြောသည်။
လောလောဆယ် ဆန်ကြမ်း မိုးစပါးဈေး အလွန်အမင်းကျဆင်းနေသော်လည်း လာမည့် (၂) လအတွင်း ဧရာဝတီတိုင်းမှ စပါးထွက်အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးမှသာ စပါးဈေးအမှန်ကို သိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်ကုန်သည်များက ပြောသည်။
ယခုလနှောင်းပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း (၀ါးခယ်မ) စပါးပေါက်ဈေးမှာ
စပါးတင်း (၁၀၀) ဈေးနှုန်း
၁။ မိုးနှံကား စပါး (၂၆၀,၀၀၀) ကျပ်
၂။ နွေနှံကားဟောင်း (၃၀၀,၀၀၀) ကျပ်
၃။ နှံကားအဟောင်း (၃၂၀,၀၀၀) ကျပ်
၄။ ပေါ်ဆန်းဟောင်း (၇၁၀,၀၀၀) ကျပ်
၅။ မနော ဆန်ချောအဟောင်း (၅၆၀,၀၀၀) ကျပ်
၆။ ဧရာဝတီ ပေါ်ဆန်း (၆၅၀,၀၀၀) ကျပ်
၇။ ရွှေဝါယဉ်အဟောင်း (၆၆၀,၀၀၀) ကျပ်
၈။ ကောက်ကြီး (၄၃၀,၀၀၀) ကျပ်
မြန်မာ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ဆွေးနွေးပွဲ အာရှဒေသတွင်း ကျင်းပဖို့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့
အစည်းတွေဟာ ရည်မှန်းချက် တိတိကျကျနဲ့ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်း
စဉ်တွေ ချမှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ အဝေးရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ညွန့်ပေါင်း
အစိုးရ (NCGUB) က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေတာ
တွေကနေ အစီအစဉ်အသစ်တခုကို အဆိုပြု တင်ပြလိုက်ပါသေးတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်းက အပြည့်အစုံ တင်ပြထားပါတယ်။
NCGUB က အဆိုပြုတင်ပြလိုက်တဲ့ အစီအစဉ်အသစ် ဆိုတာကတော့ မြန်မာ့အရေး
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအုပ်စု ဆွေးနွေးပွဲတွေကို အာရှ
ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ ကျင်းပသွားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ကျင်းပပြီးစီး
သွားတဲ့ အာရှ-ဥရောပ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီး ထုတ်ပြန်တဲ့ သဘာပတိ ကြေညာ
ချက်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထည့်သွင်းပြောဆိုထားတဲ့အပေါ်
NCGUB ရဲ့ တုံ့ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ အဲဒီလို အဆိုပြုတင်ပြထားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စဆိုင်ရာ မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ
ချမှတ်ပြီး အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ
အင်အားစုတွေကြားမှာ အတော်ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်သေးတယ်၊ ကွာဟမှုတွေ နည်းနိုင်
သမျှနည်းပြီး ထိရောက်တဲ့ သံတမန်ရေး ဖိအားပေးမှုတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ အစည်းအဝေး
တွေကို နယူးယောက်မှာတင် လုပ်မနေဘဲ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာပါလုပ်ဖို့ အဆိုပြု
တင်ပြတာဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာသောင်းထွန်းက ဆိုပါတယ်။ NCGUB ကုလသမဂ္ဂရေးရာ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသောင်းထွန်း။
"ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယား
ကိစ္စကို ဖြေရှင်းတုန်းကဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အစည်း
အဝေးတွေကို ဒေသတွင်းက နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့
အင်ဒိုနီးရှားတို့ ထိုင်းတို့ကနေပြီး ဂျကာတာတို့ဘန်ကောက်တို့မှာ ကမကထလုပ်ပြီး ကျင်းပတာတွေ
ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေကို ပြန်ဖော်ထုတ်ပြီး မြန်မာ့အရေးကိစ္စမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ မိတ်ဆွေများအဖွဲ့
အစည်းအဝေးတွေကို အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ကျင်းပသင့်ပါတယ်။
"ဒါမှလည်း နအဖအနေနဲ့ မြန်မာပြည်အရေးနဲ့
ပတ်သက်လို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အနောက် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကတင် တွန်းလာ
တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ၊ သူတို့နဲ့ မိတ်ဆွေသဘောမျိုး ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့
နိုင်ငံတွေကပါ တွန်းအားပေးလာမှု ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ ပိုမြင်လာမယ်၊ သံတမန်
ရေးအရ တွန်းအားပေးမှုတွေဟာ ပိုပြီးတော့ ဟန်ချက်ညီလာမယ်၊ ပိုပြီးတော့
တရုတ်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ ASEM ခေါ် အာရှ-ဥရောပ ထိပ်သီး
အစည်းအဝေးကနေ မြန်မာ့အရေးကိစ္စကို အထူးတလည် ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့
အတွက် အသိအမှတ်ပြုပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု လျော့နည်းနေတယ်
လို့ ဝေဖန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်ကဆိုရင် ASEM အစည်းအဝေးတွေမှာ မြန်မာ
နိုင်ငံကို တက်ရောက်ခွင့်မပြုဘူး၊ ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ် အငြင်းပွားတာတွေတောင်
ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးပြီး အခုဆိုရင် မြန်မာ့မဟာမိတ် တရုတ်က အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပတဲ့
အစည်းအဝေးကနေ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စ ဘာမှမပြောတာထက်စာရင် အခုလို ထည့်သွင်း
ပြောဆိုတာက ပိုမကောင်းပါဘူးလား၊ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကတော့ ဒီလိုထည့်ပြော
တာကို ကြိုဆိုပြီး မြန်မာ့အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တရုတ်အပါအ၀င် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့
မူဝါဒပိုင်းမှာ အပြောင်းအရွေ့ ဖြစ်လာတာကိုတော့ သတ်ိထားမိပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီဘက်မှာ တစုံတရာ တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ကျနော်တို့
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု မြန်မာပြည်အရေးကိစ္စ
ဟာ လာမယ့်တနှစ် နှစ်နှစ်အတွင်း ကြီးမားတဲ့ အချိုးအကွေ့တွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အနေ
အထားမှာ ကြေညာချက်တွေရဲ့ အနှစ်သာရ၊ ကြေညာချက်တွေဟာ စကားလုံးသာမန်မျှ
မဖြစ်သင့်တော့ဘဲ အဲဒီအနှစ်သာရတွေကို တကယ်လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့
လုပ်ငန်းစဉ်တွေဘက် အချိန်ဇယားနဲ့ အချိန်ကာလကို ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီး အကောင်
အထည်ဖော်တဲ့ဟာတွေ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း မြန်မာပြည်မှာ ဒီမို
ကရေစီရေး ပြောင်းလဲမှုဟာ ကာလတိုအတွင်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ့်
ASEM အစည်းအဝေးကနေ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို အားပေးတိုက်တွန်းတဲ့ ထုတ်ပြန်
ချက်မျိုး ထွက်လာပေမယ့် ဒီအစည်းအဝေးမှာပါဝင်တဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ထိုင်းတို့လို
အစိုးရတွေဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စီးပွားကုန်သွယ်ရေးတွေ တက်တက်ကြွကြွ ပူးတွဲ
လုပ်ဆောင်နေပြီး စစ်အစိုးရ ဆက်ပြီးရှင်သန်နိုင်ရေး လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအဆောက်
အအုံတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်နေကြတာကြောင့် ဒါဟာ ASEM ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး
ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ရှင်းရှင်းကြီးကို ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ NCGUB က ထောက်ပြထားပါ
သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံတာတွေလုပ်ပြီး
တဖက်မှာလည်း ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
တွေလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတာတွေ တပြိုင်တည်း မလုပ်နိုင်ပါဘူးလား၊ စီးပွား
ရေးအရ ဆက်သွယ်မှုတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ဖြစ်လာတဲ့ နီးစပ်မှုအရ အပြုသဘော
ဆောင်တဲ့ တွန်းအားပေးတာတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒေါက်တာသောင်းထွန်း
က သဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်အမြင်နဲ့ လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ရေတိုအမြင်နဲ့ မြန်မာပြည်က သယံဇာတ ခေါင်းပုံဖြတ်လို့ရရင် တော်လောက်ပြီဆိုပြီး
လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ ချွတ်ခြုံကျတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ
သက်ရောက်မှုတွေက မြန်မာပြည်နယ်စပ်နဲ့တင် ရပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်နီးချင်း
နိုင်ငံတွေလည်း ထိခိုက်မယ်။ တဖက်မှာ စီးပွားရေး၊ သံတမန်ရေးအရ နီးစပ်တဲ့
ဆက်ဆံမှုနဲ့ အဲဒီဆက်ဆံမှု အခြေခံပေါ်မှာ မြန်မာပြည် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်
ရေးပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတခု၊ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုတခု၊ ဒါ ဘယ်ဘက်မှ
နာစေ၊ သာစေ မဟုတ်ပါဘူး။
"တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ပိုကောင်းလာမယ်၊ ပြည်သူလူထုအတွက်လည်း ပိုကောင်း
လာမယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ အနေနဲ့လည်း မြန်မာပြည်ဟာ သိုးမည်းတကောင်မဖြစ်
ဘဲ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ
မှာဖြစ်ဖြစ် ဒီ့ထက်ပိုပြီးတော့ လုပ်လာနိုင်မယ့် အနေအထားတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်
သူတို့အနေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပါးစပ်နဲ့ပြောနေတာတင် မကဘဲ
နဲ့ လက်တွေ့တွန်းအားပေးမှုတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အခုထိတော့ မလုပ်
သေးတဲ့အတွက် ကျနော်တို့အနေနဲ့ အများကြီး အားမလိုအားမရ ဖြစ်ပါတယ်။"
အဝေးရောက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရရဲ့ ကုလသမဂ္ဂရေးရာ
ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသောင်းထွန်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍သာ အခု အဆိုပြုတင်ပြသလို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာ့အရေးမိတ်ဆွေနိုင်ငံများ
အစည်းအဝေးတွေကို ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာ လှည့်လည်ကျင်းပပြီး ထိထိ
ရောက်ရောက် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုပြီး
ထိရောက်မှုရှိလာမယ်လို့ NCGUB က ပြောပါတယ်။
ဆီးရီးယားစီးနင်းမှုမှာ အယ်လ်ကိုင်းဒါး လက်နက်မှောင်ခိုခေါင်းဆေင် သေဆုံး
28 October 2008 ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲကို အမေရိကန် ရဟတ်ယာဉ်တွေ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာက
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ နယ်စပ်ကတဆင့် အီရတ်နိုင်ငံထဲကို နိုင်ငံခြားသား တိုက်ခိုက်ရေး
သမားတွေနဲ့ လက်နက်တွေ ခိုးသွင်းနေတဲ့ ကွန်ယက်အဖွဲ့က ခေါင်းဆောင် သေဆုံး
သွားတယ်လို့ ယူဆရကြောင်း အမေရိကန် အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူဟာ အဘူ ဂါဒီယာ
(Abu Ghadiya) ဆိုသူဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုတဲ့ အမေရိကန်အရာရှိကို
ကိုးကားပြီး အမေရိကန် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ဂါဒီယာဟာ
အီရတ်မှာရှိတဲ့ အယ်လ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အစောပိုင်းတုန်းက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား အရပ်သား
၈ ယောက် သေဆုံးခဲ့မှုဟာ အမေရိကန်ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့
ဆီးရီးယားနိုင်ငံက စွပ်စွဲပြောဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာ
တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် ဒါဟာ မှားယွင်း
တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ဘဲ တမင်ကြိုတင်ကြံစည်ပြီးမှ တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကို ပြသ
လိုက်တာပဲလို့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ၀ါလစ်ဒ် အယ်လ်-မူလမ်
(Walid al-Muallem) က လန်ဒန်မြို့မှာ မနေ့က ပြောခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 28 2008 15:33 - မြန်မာစံတော်ချိန်
မဲဆောက်မှ အုန်းဖျန်သို့ ထွက်သည့် ခရီးသည်တင်ကားများက နေ့စဉ်နံနက် ၇-နာရီခွဲတွင် မဲဆောက်မှစ၍ ထွက်သည်။ တနာရီခြားတစီး ပုံမှန်ထွက်၏။ မွန်းလွှဲပိုင်း သုံးနာရီခွဲအထိ ရှိသည်။ လိုင်းကားများက `တိုယိုတာ ဟိုင်လက် ၅-ချိပ်`ကားငယ်လေးများ ဖြစ်သည်။ လမ်းက ….အတက်၊ အဆင်း၊ အကွေ့၊ အကောက်များ၏။ …..လှိုင်းလုံးကြီးများသဖွယ် …..။ စွေ့ခနဲ မြောက်၍ တက်သွားသည်လည်း ရှိ၏။ ပြီးလျှင် ….. ငြိမ့်ခနဲ ပြန်၍ ဆင်းပြန်၏။ တက်ရင်းနှင့် ကွေ့သည်။ ကွေ့ရင်းနှင့် ဆင်းပြန်၏။ မလွယ်…..။
မဲဆောက်မှ ၄၈-ကီလိုအထိမူ လမ်းက မြေပြင်ညီလမ်းဖြစ်သည်။ လမ်းကောင်း၏။ ၄၈-ကီလိုလွန်လျှင် လမ်းသည် တောင်ပေါ်သို့ တက်ပြီ။ အကွေ့အကောက် အဆင်းအတက်များအား ဖြတ်ရပြီ။
ယခင်ကမူ ဤလမ်းကြောင်း၌ ခရီးသည် အသွားအလာ မများလှ…..။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် မဲဆောက် UNHCR ရုံး၌ အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အုန်းဖျန် ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ PAB နှင့် UNHCR မှ ပို့ဆောင်ခဲ့သည့် နောက်ပိုင်းတွင်မူ ဤလမ်း၊ ဤခရီးသည် အသွားအလာ များလာခဲ့တော့သည်။ နောက်ပိုင်း PAB နှင့် UNHCR ၏ အစီအစဉ်နှင့် မဟုတ်ဘဲ မိမိဘာသာမိမိ ၀င်ရောက် နေထိုင်ကြသည့် သူများနှင့် …..ဤခရီးလမ်းက `သာ` ၍နေတော့သည်။
ကားဘေးသို့ `စံမလော့` နှစ်စီး ဆိုက်လာသည်။ `စံမလော့` ပေါ်မှ ပစ္စည်းများ ကားပေါ်သို့ တင်ကြသည်။ ပစ္စည်းများက များ၏။ အိမ်ထောင် ပြောင်းသကဲ့သို့ …..။ လူကလည်း များသည်။ ခလေးငယ်များက လေးယောက်၊ ဆယ့်သုံးနှစ် ဆယ့်လေးနှစ်အရွယ် မိန်းမငယ်များက သုံးယောက် ….။ ပြီးလျှင် ….အသက်လေးဆယ်ခန့် အမျိုးသမီးက နှစ်ယောက် …..။ ကားငယ်လေးအတွင်း လူပြည့်သွား၏။ သူတို့ကား …. အိန္ဒိယနွယ်ဖွား မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်သည်။
လူပြည့်ပြီဖြစ်၍ ကားသည်ဂိတ်မှ စ၍ ထွက်သည်။ မိုးမရွာသဖြင့် ကားဘေးမိုးကာများအား လိပ်တင်ထားသဖြင့် လေ၀င်လေထွက် ကောင်း၏။ အ၀ိုင်းတခုအား ပတ်၍ ကားသည် အာရှလမ်းမပေါ်သို့ တက်သည်။ မြို့ပြ၏ လမ်းမများပေါ်မှ ဆင်ခြေဖုံး…..။ ကတ်ပိဘန်းရွာလေးအား ကျော်ခဲ့ပြီ။ ကတ်ပိဘန်းရွာက မဲဆောက်၏ အ၀င်အ၀ရွာငယ်လေး….။ မြို့နှင့်တဆက်တည်း ထိစပ်နေသည့်ရွာ….။ ကတ်ပိဘန်းလွန်လျှင်….မယ်ကု….။
ကားငယ်လေးအတွင်း၌ ထိုင်းလူမျိုး ခရီးသည်တဦးမျှမပါ။ အားလုံး မြန်မာပြည်သားများ….။ အုန်းဖျန် ဒုက္ခသည်သို့ သွားမည့်သူနှင့် နို့ဖိုးဒုက္ခသည် စခန်းသို့ သွားကြမည့်သူများသာ …..။ ကားပေါ်၌… နောက်ဆုံး တက်လာခဲ့ကြသည့် ခလေးတွေ အများကြီးနှင့် သူတို့ မိသားစုက စိတ်ဝင်စားစရာ။ သူတို့ အချင်းချင်းပြောနေသည့် စကားသံများအား နားစွင့်၍ နေမိတော့သည်။
`ညက ငါတို့အိပ်တဲ့အိမ်နဲ့ ကားဂိတ်… နီးနီးလေးကို စံမလော့သမားက လိုက်ပတ်နင်းနေပြီး နှစ်ရာတောင် တောင်းတယ်`
`ဟဲ….. မပေးလို့ ရမလား။ စံမလော့သမားက မပေးရင် ….ရဲကို အကြောင်းကြားလိုက်မယ်လို့ ပြောတာကိုး…..`
သူတို့အထဲမှ ၁၂-နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနှင့် အသက်လေးဆယ်ခန့်ရှိ ခပ်၀၀ သားသည် မိခင်တို့ ပြောနေကြသည့်အား ကြားရ၏။
ကားပေါ်မှ အသက်ခြောက်ဆယ်ခန့်ရှိ အမျိုးသမီးကြီးတဦးက သူတို့အား စပ်စုလိုက်သည်။ ဤအမျိုးသမီးကြီးက နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်မှ ဖြစ်သည်။ စခန်းသစ်ကျပြီး နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်စခန်း စတည်ကတည်းက နို့ဖိုးတွင်ပင် နေလာခဲ့သည့်သူ….။ သူမသည်လည်း အိန္ဒိယနွယ်ဖွား မြန်မာပြည်သား အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တဦးပင် ….။ နို့ဖိုးတွင် ဈေးဆိုင် တည်ထား၏။ သူ့ဆိုင်က …. ရေဒီယို၊ ကက်စက်၊ နာရီမှအစ အိုးခွက် ပုဂံအထိ ရောင်းသည်။ သူမသည်လည်း UNHCR အစီအစဉ်နှင့် တတိယနိုင်ငံ တခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချရန် စီစဉ်ထား၏။ အမေရိကန်က ငြင်းပယ်ခဲ့သဖြင့် သြစတြေးလျသို့ ခိုလှုံခွင့်ရရန် အဆိုပြုထားသည်။
`ကျမတို့က မုဒုံကပါ…. မနေ့ညကမှ မဲဆောက်ကို ရောက်တယ်။ မောင်က ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းခေါ်လို့လေ…. မောင်နဲ့ အဆက်အသွယ် ပျက်နေတာကြာပြီ၊ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်တောင် ရှိပြီ။ သူတို့လည်း နိုင်ငံခြား သွားတော့မယ်။ နင်တို့လည်း သွားချင်ရင်လာ ဆိုတာနဲ့ လာခဲ့တာ …..။ သူက ကျမနဲ့ အတူတူ မုဒုံမှာ ဈေးရောင်းနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ….။ သူကလည်း နင်တို့သွားရင် ငါလည်းလိုက်မယ် ဆိုတာနဲ့ နှစ်ယောက်သား ခလေးတွေခေါ်ပြီး ထွက်လာခဲ့တာ….`
ခပ်၀၀နှင့်အမျိုးသမီးက သူမ၏ဘေးတွင် ထိုင်နေသည့် ပိန်ပိန်နှင့် အမျိုးသမီးအား လက်နှင့်ပုတ်ရင်း ပြောသည်။ ပိန်ပိန်နှင့် အမျိုးသမီးက ခလေးငယ်အား ရင်ခွင်အတွင်း ပွေ့ချီထားရင်း …. ပြုံး၍ ခေါင်းညိတ်ပြသည်။
`ဒါ အားလုံးက ကျမ ကလေးတွေပဲ….သူ့ခလေးက ဒီနို့စို့တယောက်ပဲ….။ သူ့ယောက်ျားလည်း မရှိတော့ဘူး….. ကျမယောက်ျားလည်း ဘန်ကောက်တက်မယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားတာ လေးငါးနှစ်ရှိပြီး ပြန်လည်း မဆက်သွယ်ဘူး…. ကျမတို့ဘာသာ လုပ်စားနေကြရတာ….`
`မုဒုံ…. ကားဂိတ်မှာ အကြော်ကြော်တယ်။ သူတို့တွေက ရောင်းပေါ့….`
ဝဝနှင့် အမျိုးသမီးက အပျိုဖော်ဝင်စ သမီး ၃-ယောက်ကို လက်ညိုးထိုးပြရင်း ပြော၏။ မုဒုံကားဂိတ်က စည်ကားသည့် ကားဂိတ်တခု ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်၊ သံဖြူဇရပ်၊ ထားဝယ်လမ်းကြောင်းပေါ်၌ ရှိသည်။ ပြီးလျှင် ….တံခွန်တိုင်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး လမ်းပိုင်းသို့ ထွက်သည့် ကားများလည်း ဂိတ်ထိုးရာ ဖြစ်သည်။ ဤကားဂိတ်၌ သူတို့သည် အကြော်ကြော်၊ အကြော်ဗန်း ခေါင်းပေါ်တင်၍ လှည့်ရောင်းကြ၏။ ဤနည်းနှင့် …. ဤမုဆိုးမ၊ ဤတခုလပ်တို့သည် သားသမီး ခုနှစ်ယောက်၊ ရှစ်ယောက်အား ရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေခဲ့ကြ၏။ ယခုမူ …. အားလုံးကို ထားရစ်ပြီး မောင်ခေါ်ရာ အရပ်ဆီသို့ ထွက်ခဲ့ကြပြီ…..။ မည်သည့်အရပ်ဟူ၍ မသိ….။ မည်သို့ သွားရမည်နည်း….။ နေရာသစ်တွင် မည်သို့ အခြေချနေရမည်နည်း….။ မသိ….။ မောင်ခေါ်ရာသို့ လိုက်လာခြင်းမျှသာ ….။ သူတို့တွေအား မဲဆောက်တွင် လာရောက်ကြိုသည်က ဆယ်နှစ် နှစ်အရွယ် မောင်၏သား….။ သူမ၏တူ ….။
တယောက်က မေးသည်။ သူတို့က …. မနေ့က မြ၀တီမှ မဲဆောက်သို့ ဖြတ်ကူးခဲ့သည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကူးခွင့် လက်မှတ် အပြာရောင်ကဒ်လေးအား ထုတ်ပြသည်။ ဤကဒ်ပြားက မနေ့ကပင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး၍ သွားပြီ။ သုံး၍မရတော့….။ ဤလက်မှတ်နှင့်လည်း ဤလမ်းခရီးအား သွား၍မရ….။ သူတို့ ဘာမျှမသိကြ….။ ဤလမ်းခရီးတွင် ထိုင်းပုလိပ် ဂိတ်ပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ ထိုင်းအာဏာပိုင် တယောက်ယောက်၏ ခရီးသွားခွင့် လက်မှတ် မပါလျှင် သွား၍ မရ…။ ဆွဲချထားလိမ့်မည်။ အချုပ်သို့ ပို့မည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုနှင့် ရုံးတင်မည်။ အနည်းဆုံးတော့ ၁၂-ရက် ထောင်ချခြင်း ခံရမည်။ ပြီးလျှင်မူ …. မြ၀တီသို့ ပြန်ပို့မည်။ ဤသည်တို့အား သူတို့ သိပုံမရ….။ကြောက်ကြောက်ရွှံရွှံတော့ ဖြစ်နေပုံရသည်။ မျက်ဝန်းများအတွင်း စိုးရွှံမှုများအား တွေ့ရ၏။ အရှေ့တွင် …. မယ်ကုရွာအ၀င်ရှိ ပုလိပ်ဂိတ်အား ဖြတ်ရမည်။ ကားသည် `ဘွန်ချိုင်း` အထည်ချုပ်စက်ရုံအား ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီ။ `ဘွန်ချိုင်း` စက်ရုံလွန်လျှင် …..`မယ်ကု`….ဂိတ်။ မယ်ကုဂိတ်က လမ်း၏ လက်ယာဖက်တွင် ရှိသည်။ ယာဉ်ကြော၏ လက်ယာယာဉ်ကြော၌…..။ ကားက လက်ဝဲဖက်ယာဉ်ကြောမှ မောင်းလာ၏။ လက်ဝဲဖက်ယာဉ်ကြောမှ ကားများအား စစ်လျှင်မူ ပုလိပ်နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်သည် ပုလိပ်ဂိတ်၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ဗံဒါပင်အောက်၌​ ခုံများနှင့် ထိုင်စောင့်၍ စစ်ကြ၏။ မိုးရွာလျှင်မူ သူတို့မထွက် ….။
ကားသည် အရှိန်အား လျော့လိုက်၏။ ဂိတ်အရှေ့ ယာဉ်ကြောတွင် ချထားသည့် သံဆူးကြိုး တံတိုင်းငယ်များအတွင်း ကွေ့၍ ကောက်၍ မောင်းဝင်နေသည်။ ကောင်းကင်သည် ချက်ချင်းပင် ရေအိုးအား သွန်ချလိုက်သကဲ့သို့ ….. မိုးရွာချလိုက်သည်။ ဗံဒါပင်အောက်၌ ပုလိပ်များမရှိ….။ သံဆူးကြိုး တံတိုင်းငယ်များအား လွန်လေပြီ….ကားအရှိန်အား မြှင့်လိုက်၏။
သူတို့အားလုံး သက်ပြင်းရှည်အား ချလိုက်ကြသည်။ မယ်ကုဂိတ်တော့ လွန်ပြီ…..။
`တဂိတ်တော့ လွန်သွားပြီ၊ အုန်းဖျန်အထိဆိုရင် အရှေ့မှ ပုလိပ်ဂိတ် ၃-ဂိတ် ကျန်သေးတယ်….`
ကားအတွင်း စကားသံများ ပြန်၍ ထွက်လာသည်။ အသက်ရှုသံတို့ ပြန်၍ မှန်လာကြပြီ။ မယ်ကုဂိတ် အနားဖြတ်ခါနီးချိန်၌ ရေအိုးမှောက်ရွာချခဲ့သော မိုးသည် ချက်ချင်းပင် တိတ်၍ သွားပြန်သည်။
`အရှေ့မှာ `ကြာလေခို့` ပုလိပ်ဂိတ်ရှိတယ်။ အရမ်းဆိုးတယ်။ …. လက်မှတ်မပါလို့ကတော့ အတင်းဆွဲချတာပဲ …။ ... ပိုက်ဆံများများ မတွေ့စေနဲ့ ``
အသက်ကြီးကြီး အစ္စလမ် အမျိုးသမီးကြီးက သူတို့တတွေအား ပြောနေသည်။
`မုဒုံမှာရှိတဲ့ အိမ်လေးရောင်းလာတာ…. သုံးသိန်းလောက် ရတယ်။ အဲ့ဒါ အကြွေးလေးဘာလေး ဆပ်ပြီး နှစ်သိန်းလောက်တော့ ပါလာတယ်။ ကားခနဲ့…..ပြီးတော့ ….မှတ်ပုံတင်မရှိတော့ တလမ်းလုံးကားတခါရပ်၊ တယောက်ကို တထောင်ပေးလိုက်နဲ့ မြ၀တီရောက်တော့ …..တသိန်းနဲ့ သုံးသောင်းပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲ့ဒါလေးကို ဘတ်ငွေလဲပြီး လာခဲ့တာ….``
ပြောရင်း ….. ခပ်၀၀ အမျိုးသမီးသည် ဘတ်ငွေတထောင်တန်လေး နှစ်ရွက်အား ချွေးခံအင်ကျီအတွင်းလိပ့်၍ ထိုးထဲ့နေ၏။
ကားသည် `ဖုတ်ဖမြို့`လမ်းခွဲသို့ လွန်ခဲ့လေပြီ။ ဖုတ်ဖလမ်းခွဲအား လွန်လျှင် …..နာမည်ကြီးသည့် `ကြာလေးခို့`ပုလိပ်ဂိတ်…..။ မိုးကမသည်း…..ဖွဲဖွဲနှင့်သာ စွေနေသည်။ ကားဘေးရှိ မိုးကာများ ချထားသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား မမြင်ရ….။ ကား၏ အနောက်ပိုင်း…. မှတဆင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာ တွေ့ရ၏။ အရှေ့ကိုမူ မတွေ့ရ….။ `ကြာလေးခို့` ဂိတ်က လမ်း၏ လက်ဝဲဖက်တွင် ရှိသည်။ လမ်းမကြီးက အသွားလမ်း၊ အပြန်လမ်း…. နှစ်လမ်းမောင်း လမ်းမကြီး ဖြစ်သည်။ ယခုသွားနေသော ယာဉ်ကြောလမ်းက လက်ဝဲဘက် ယာဉ်ကြောမှ ဖြစ်သည်။ ပုလိတ်ဂိတ်နှင့် တဖက်တည်း….။ မိုးက ထင်သလောက်မသည်း….။ ပြိုပါတော့လား မိုးရယ်….။ ကားသည် တဖြည်းဖြည်း`ကြာလေးခို့`ဂိတ်နှင့် နီးလာပြီ။ သုံးမိစ်…. နှစ်မိနစ်… တမိနစ်…. စက္ကန့် ၆၀… စက္ကန့် ၅၀….။ ကားအရှိန်က လျော့ချလိုက်ပြီ….။ စက္ကန့် ၃၀….။ စက္ကန့် ၂၀….။ ဘရိတ်နင်းလိုက်သဖြင့် ကားသည် တန့်ခနဲ ရပ်သွား၏။ ဇက်ကြိုးအား သတ်လိုက်သကဲ့သို့ ….။ သူတို့သည် တခုခုအား တတွက်တွက်နှင့် ရွတ်နေကြ၏။ `သံဗုဒ္ဒေ`ဂါထာကဲ့သို့ ကိုရမ်ကျမ်းလာ…. အန္တရာယ်ကင်း ကျမ်းစာ တပုဒ်ပုဒ် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ပုလိပ်များ….နှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက် ထီးဆောင်း၍ ကားဆီသို့ လာကြလိမ့်မည်။ ပြီးလျှင် …. ကားပေါ်တတ်၍ ထိုင်ပြီး ခရီးသွားလက်မှတ်များအား စစ်ဆေးကြမည်။ လက်မှတ် မပါသည့်သူများအား ဆွဲချမည်….။ ဖမ်းမည်။ ငွေတောင်းမည်။ ငွေပေးနိုင်လျှင်မူ….။
စက္ကန့်ငယ်တို့၏ ရွှေ့လျာမှုသည် နှေးကွေးလှပေစွ….။ ခဏငယ်တို့ကား ကြာရှည်လှပေစွ….။ ကားအနောက်၌ အရိပ်တစ်ခု ၀င်လာ၏။ သွားပြီ….။ သံလွင်ရောင် ဂျာကင်ထားသည့် ထိုင်းအမျိုးသားတယောက်။ ဘောင်းဘီ၏ အရောင်ကမူ ပုလိပ်တို့ ၀တ်သည့် ယူနီဖောင်းအရောင်မဟုတ် ….။ အဖြူရောင် ပျောက်ကျားဘောင်းဘီ….။ ထီးကိုပိတ်ပြီး ကားပေါ်သို့ တက်သည်။ သူတို့တွေထဲမှ ဆယ်သုံးလေးနှစ်အရွယ် အပျိုမငယ်လေးတဦးအား ထိုင်းလို ပြောနေ၏။ လက်မှတ်တောင်းတာ နေမှာပါ။ အားလုံးပြူးကြောင်ကြောင်နှင့် ကြောင်နေကြသည်။ ထိုင်းလို ထပ်ပြောပြီး လက်ဟန်ခြေဟန်နှင့် နေရာနည်းနည်း ဖယ်ပေးဖို့ ပြသည်။ သိလိုက်ရပြီ။ သူထိုင်ဖို့နေရာ ရွှေ့ခိုင်းခြင်း ….။ သူလည်း ခရီးသည်….။
ကားသည် …. ဂီယာထိုးပြီ `ကြာလေးခို့` ဂိတ်အရှေ့မှ ထွက်သည်….။ လွတ်ပြန်ပြီ…. တဂိတ်။ ကြာလေးခို့လွန်လျှင် အရှေ့၌ ကီလို-၄၈ တဂိတ်သာ ကျန်တော့၏။ ထိုဂိတ်က သိပ်ပြီး အစစ်အဆေးမရှိ….။ ဤသို့ သိထားခဲ့ကြ၏။ ကားငယ်လေးအတွင်း စကားသံများပြန်၍ ဝေစီလာသည်။
`နင်တို့ တတွေ ကံကောင်းတယ်။ ဘာလက်မှတ်မှ မပါဘဲနဲ့ လာကြတာ….ဒီဂိတ်က မစစ်လို့ ….စစ်လို့ကတော့ နင်တို့အားလုံး ဆွဲချခံထိမှာပဲ …..နင်တို့ကို စိတ်ပူပြီး ငါလည်း နင်တို့အတွက် တချိန်လုံး စိတ်ထဲကနေပြီး စာဖတ်နေရတယ်``
နို့ဖိုးသို့ သွားမည့် အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသမီးကြီးက ဆိုသည်။ သူမသည်လည်း အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တဦးဖြစ်သည်။ သူမပြောသည့် စိတ်ထဲကနေပြီး စာဖတ်နေတယ် ဟူသည်မှာ ကိုရမ်ကျမ်း စာတပုဒ်ပုဒ်အား ရွက်ဖတ်နေခြင်းအား ပြောတာဖြစ်မည်။
ခပ်၀၀နှင့် သားသည်အမေက …``ကျမတို့လည်း ဒီမလာခင် ….မုဒုံမှာကတည်းက ဒီခရီး…ဒီခရီးသွားမယ်။ အလ္လာခွင့်ပြုပါဆိုပြီး အလ္လာဆီမှာ ခွင့်တောင်းလာတာ….``
သူတို့ အားလုံး၏ မျက်နှာများက ပျော်ရွှင်၍ နေကြသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး….။ သားရဲတွင်း အတွင်းမှ လွတ်လာသည့် ယုန်သူငယ်များလို….။ တောင်တန်းများနှင့် နီးလာ၍လား မသိ…..။ ရာသီသည် ပြောင်းလဲ၍လာသည်။ မိုးစဲသွားသော်လည်း ကောင်းကင်သည် လင်းလင်းထင်ထင်မရှိ….။ အေးစိမ့်မှုက ချည်းနှင်း၍ ၀င်လာပြီ။ ယူကလစ်ပင်များက ကားလမ်း၏ ၀ဲယာတွင် အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်း….။ အဝေးမှ တောင်တန်းကြီးများက မြင့်မြင့်မားမား….။ အထပ်လိုက်….အထပ်လိုက်….။ ညို့ညို့မှိုင်းမှိုင်း….။ မှုန်မှုန်ဝါးဝါး….။ မြေသားအရောင်သည် ပတ္တမြားသွေးလည်းမကျ….သံချေးရောင်….။ မိုင်တိုင်များအား တခုပြီး၊ တခု ဖြတ်ကျော်၍သွားသည်။ ကီလို ၄၀….။ ကီလို ၄၂……. ၄၅….. ၄၆…. ၄၇ …။ ၄၈ ကီလို ပုလိပ်ဂိတ်နှင့် နီးလာသော်လည်း ….သူတို့တတွေ၏ စိုးရိမ်မှုက `ကြာလေးခို့`ဂိတ်လောက် မပူလောင်…..။ အရင်ကလည်း ဤဂိတ်က သိပ်၍ စစ်ဆေးသည့် ဂိတ်မဟုတ်….။ အပေါ့အလေး ဆင်းသွား၍ ရသည်။ တောင်ပေါ်သို့ မတက်မှီ နောက်ဆုံးဂိတ်….။ တခါတလေတွင်မူ ပုလိပ်တယောက်တလေ ထွက်လာပြီး ကားအား လှည့်၍သာ ကြည့်သည်။ မေးမြန်း စစ်ဆေးသည်မျိုးက မရှိ….။
ကားသည် ၄၈-ကီလို ပုလိပ်ဂိတ် အရှေ့၌​ ထိုးရပ်လိုက်သည်။ ၄၈-ကီလို ပုလိပ်ဂိတ်က ယူကလစ်ပင်များ အောက်၌ အရိပ်ခို၍ နေသည်။ အချို့က ကားပေါ်မှဆင်း၍ အပေါ့အပါး သွားကြသည်။ ခလေးများနှင့်သူတို့ မိသားစုသာ ကားပေါ်၌ ကျန်ခဲ့ကြ၏။ ပုလိပ်တယောက်သည် ဂိတ်တဲလေးအတွင်းမှ ထွက်လာပြီး ကားအား လှည့်ပတ်ကြည့်၏။ ပြီးလျှင် ….. ဆယ့်သုံးလေးနှစ်အရွယ် မိန်းမငယ်လေးများအား လက်မှတ် တောင်းကြည့်၏။ မိန်းမငယ်များက ထိုင်းလို ပြောသည်အား နားမလည်….။ ကျီးကြည့် ကြောင်ကြည့်…. ကြည့်နေကြသည်။ ပုလိပ်က သူတို့အား ကားပေါ်မှ ဆင်းခိုင်းသည်။ ခလေးငယ်များကိုလည်း မေး၏။ လက်မှတ်က မရှိ….။ ခလေးများအား ဆင်းခိုင်းပြန်သည်။ ပိန်ပိန်နှင့် သားသည် အမေသည်လည်း နို့စို့အရွယ် ကလေးငယ်အား ရင်တွင်ပွေ့ချီရင်း …. ကားအောက်သို့ ဆင်းပြန်သည်။ တယောက်ကိုမေးလည်း ထိုင်းစကား နားမလည်…..။ လက်မှတ်တောင်းလျှင်လည်း လက်မှတ်ကမရှိ….။ တယောက်တလေလည်းမဟုတ်….။ အားလုံးပေါင်း ၉-ယောက်….။
သွေးဆုတ်၍ ဖြူရော်ရော် ဖြစ်နေသော ထိုင်းပုလိပ်၏ မျက်နှာသည် အရောင်တမျိုး ပြောင်းလာသည်။ နောက်ဆုံး ကျန်နေသည့် ခပ်၀၀နှင့် အမျိုးသမီးအား ကားပေါ်မှ ဆင်းခိုင်းသည်။ အမျိုးသမီး၏ ၀ဖိုင့်သော ခန္ဓာနှင့် ကားမူး၍ သူမ၏ ရင်ခွင်တွင် လဲနေသော ခလေးကြောင့် ချက်ချင်း ကားပေါ်မှ မဆင်းနိုင်….။ ထိုင်းပုလိပ်သည် ဒေါသ ထွက်လာ၏။ အမျိုးသမီး၏ေ ကျာကုန်းအား တဘုန်းဘုန်း ရိုက်နှက်ပြီး ဆင်းခိုင်းနေ၏။
ကျန်ခရီးသည်များက မျက်နှာ လွှဲထားလိုက်ကြ၏။ မြင်နေရသည့် မြင်ကွင်းက စိတ်မသက်သာစရာ…။ မတတ်နိုင်….။ သူတို့အားလုံးအား ၄၈ ကီလိုဂိတ်ရှိ အချုပ်ခန်းအတွင်း ထည့်လိုက်ကြသည်။ သူတို့၏ ပစ္စည်းများအား ကားပေါ်မှချ၍ ယူကလစ် ပင်ရင်း၌ပင် စုပုံထား၏။ ကျန်ခရီးသည်များ ကားပေါ်သို့ ပြန်၍ တက်ကြသည်။ ယူကလစ်ပင် အရိပ်မှ ကားငယ်သည် တဖြည်းဖြည်း လှိမ့်၍ ထွက်လာသည်။ ၄၈-ကီလို ရဲကင်းစခန်းက ယူကလစ်ပင် အရိပ်အောက်၌ ပုန်းခိုရင်း ကျန်ရစ်လေပြီ….။ ဤ ရဲကင်းစခန်း၏ အချုပ်ခန်းငယ်လေးအတွင်း၌ကား ….. သူတို့ မိသားစုများ…..။
ကားသည် တောင်တန်းကြီးများဆီသို့ အရှိန်နှင့် တိုးဝင်သွားနေ၏။ မြင့်မားသော တောင်တန်းကြီးများအား ကွေ့၍ … ၀ိုက်၍… ချိုး၍… တက်ရပေလိမ့်မည်။